के हो भुतकाण्ड? छिमेकीले उठाए नयाँ प्रश्न टिकाथली तनाव बढ्दो, रबी लामिछानेलाई दिए यस्तो चुनौती | NewsSudur
के हो भुतकाण्ड? छिमेकीले उठाए नयाँ प्रश्न टिकाथली तनाव बढ्दो, रबी लामिछानेलाई दिए यस्तो चुनौती
यतीबेला टिकाथलीको एक घरमा भुतप्रेतले तर्साउदै अाएकाे भनेर व्यापक चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ । त्यहाँका स्थानीवासी, सम्पूर्ण देशवासी र बिदेशमा रहनुभएका लाखौ नेपालीहरु यो भुतकाण्डको बारेमा अनेक टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन । २१ औ शताब्दीमा विज्ञानले नस्वीकार्ने भुतप्रेतको बारेमा पक्ष र बिपक्ष जस्तै वादविवादको अवस्था सिर्जना भैरहेको छ।
चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत यो घटना बाहिरिएसँगै विश्वव्यापी रुपमा यसको चर्चापरिचर्चा हुन थालेको हो । टिकाथलीमा रहेकाे अन्जना उपाध्यायको घरमा गत एकमहिना देखि भूतप्रेतकाे त्रास सिर्जना गरीरहेकाे भन्दै उनको परिवार र त्यहाँ वरपरका स्थानियवासी त्रसित छन । तर वास्तविक रूपमा उक्त घरमा के भइरहेकाे छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
पारिवारिक श्रोतका अनुसार उपाध्ययकी अामाकाे मृत्यु भएकाे एक वर्षपछि घरमा भूतअात्माले तर्साउन थालेकाे हाे । उनीहरुका अनुसार घरमा सामान्य अवस्थामा बसिरहदा पनि अलाैकिक तरीकाले सिसा फुट्ने, चियाकाे कपहरू अाफै हावामा उड्ने रहस्यमय अावाज सुनिने, र्इटाहरू हावामा उडेर अाउने, एक ठाउँकाे सामान अर्काे ठाँमा अाफै पुग्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन ।
बिभिन्न मानिसको मिश्रीत अभिव्यक्ति आउन थालेपछी यो विषय यतीबेला निक्कै विवादमा पनि रहेको छ । कसैले उक्त घरमा सांचिकै भुत भएको बताइरहेका छन् भने केहीले परिवारको फण्डा भएको बताएका छन । सत्य तथ्य के हो कुनै ठोस प्रमाणको अभावमा यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको भएपनी विभिन्न तान्त्रिकहरु भने आफुले ठिक पार्ने भन्दै अगाडी सरी रहेका छन् त कोही यसको अध्यनमा लागीपरेका छन् । पुरा भिडियो हेर्नुहोस ….